Mareykanka oo qaaday duqeyntiisii ugu horeysay ee Soomaaliya sanadka 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo qaaday duqeyntiisii ugu horeysay ee Soomaaliya sanadka 2020
January 4, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa qaaday duqeyntiisii ugu horeysay ee Soomaaliya ee sanadka 2020 isagoo bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab.
Duqeynta ayaa Jimcadii ka dhacday tuulada Bacaw oo kutaala gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM), iyagoo intaas ku daray in wax shacab ah aysan dhibbaato ka soo gaarin.
Sanadkii tagay 2019, Mareykanka ayaa ku dhawaad 40 duqeymood ka geystay gudaha Soomaaliya oo uu la beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab iyo Daacish, waxaana duqeymahaas ku dhintay tobonaan dagaalyahan.
Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha Soomaaliya sanadkii 2017 kadib markii Madaxweyne Donal Trump uu sheegay in koonfurta Soomaaliya ay tahay “goob colaadeed”.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah xafiiskiisa ku qaabilay qunsulka cusub ee Itoobiya. Qunsulka cusub ee Itoobiya u fadhiya Puntland Mabratu Waldo Aragay iyo Madaxweynaha Puntland ayaa ka [...]